Tena mirongatra ny valanaretina | NewsMada
Tena mirongatra ny valanaretina
Par Taratra sur 18/07/2020
Inona mbola holazaina amin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao? Misy hatrany… Misy hatrany tsinona ny tranga vaovao amin’ny olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus. Tsy vitan’izany, misy hatrany koa ny trangan’aretina ao anatin’ny fahasarotana, ny mamoy ny ainy amin’izany.
Na izany aza, tsy azo odian-tsy hita ny fisian’ny marary sitrana. Ady fiady izany: misy ny maty, misy ny sitrana soa aman-tsara. Tsy misy resy tsy miady, tsy misy mandresy tsy miady. Mitohy ny ady, vao mainka aza atao mafimafy kokoa no ho ny teo aloha. Tena mirongatra ny valanaretina amin’izao.
Misy ny fijoroana vavolombelona etsy sy eroa, nataon’ireo nivoaka velona tao anatin’ny ady mafy natrehiny. Tsy mbola resy tosika ny aretina amin’izao, fa tsy hoe tsy azo resena. Nefa tsy miandry ho voa ny tena vao hino, hiaro tena, hitandrina… Tsy mitsitsy ny aretina, tsy vitan’ny hoe: aza voany ihany.
Mila mitandrina ny rehetra amin’izao firongatry ny valanaretina izao, indrindra ho an’ny faritra Analamanga; eny, na efa saika miparitaka manerana an’i Madagasikara aza izany. Tsy fampihorohoroana, sanatria: mirongatra ny valanaretina na efa arahina aza ny fepetra, vao mainka fa atao antsirambina.
Nahoana, ohatra, no tonga any amin’ny faritra hafa tsy mbola voa teo aloha ny tsimokaretina, na efa manidy ny sisintaniny izao aza ny faritra misy azy? Nefa efa hoe hentitra sy henjana ny fampiharana fepetra. Ny tsy fisian’ny fanaovana fitiliana ve no antony? Na aelin’ny rivotra tokoa ny tsimokaretina…
Na ahoana na ahoana, tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany. Tsy fantatra intsony izay mety ho voa, ny toerana misy ny tsimokaretina, ny fomba ahazoana azy… Tena mirongatra ny valanaretina amin’izao, ka mila hamafisina araka izay azo atao ny fitandremana amin’ny aleha sy atao rehetra.
Tsy vitan’ny resaka io. Ny tsirairay no mila miaro tena, miaro ny hafa koa. Tsy lavitra ny loza fa manodidina na efa mihodidina ny tena: tsy hita maso, tonga na mamely amin’ny tsy ampoizina, tsy azo sangiana fa tsy mitsitsy… Mahery tsy maody, tsy ela velona.